Xushmee Awooddayda | Martech Zone
Khamiis, Juun 6, 2013 Khamiis, Juun 6, 2013 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waan joojiyay raadinta taageerayaasha iyo kuwa raacsan. Uma jeedo taas in la yiraahdo ma aanan dooneynin inaan sii wado kasbashada dadka soo raaca, waxaan u jeedaa inaan joojiyay raadinta. Waxaan joojiyay inaan ku saxsanaado siyaasad ahaan khadka tooska ah. Waxaan joojiyay iska ilaalinta khilaafaadka. Waan joojiyay dib u celinta markii aan lahaa ra'yi adag. Waxaan bilaabay inaan run ka ahaado waxa aan aaminsanahay oo aan diirada saaro bixinta qiimaha shabakadeyda.
Tani kuma dhicin uun dhagaystayaashaydii baraha bulshada, waxay ku dhacday ganacsigeygii sidoo kale. Saaxiibbada, macaamiisha, wada-hawlgalayaasha… Waan ka fogaaday dad badan. Waxaan waayey saaxibtinimo, taageerayaal badan, iyo taageerayaal badan - weligey. Wayna socotaa. Kaliya habeenki kale ayaa la ii sheegay in aanan aheyn shicib barta Facebook oo ay ahayd qabow ma ahan. Waxaan u ogeysiiyaa qofka inay joojin karaan raacdadayda waqti kasta.
Runtu waxay tahay, Ma doonayo inaan u dhaqmo sida qof oo kale maahan inaan isku dayo oo aan dadka ku khiyaaneeyo inay i raacaan. Sidoo kale ma raaco dadka kale ee aan daawado waxay raali gelinayaan raacyadooda. Iyagu waa Vanilla… waana jeclahay Rocky Road.
Dadku waxay isku qaldaan ixtiraamka iyo maamulka iyo kartida iyo qabowga. Ma doonayo inaan dadaal ku bixiyo sidii oo kale, laakiin waxaan doonayaa inaan noqdo qof qiiro leh oo daacad ah. Goobta shaqada, ma doonayo inaan isku hareereeyo dad leh haa… Aad baan u ixtiraamayaa dadka markay joojiyaan qoob-ka-ciyaarka waxayna ii sheegaan waxa aan u baahanahay inaan sameeyo. Haddii aad runti doonaysid inaan kaa eryo albaabka, noqo mid dagaal badan oo dagaal badan ama aan daacad ahayn. Ma jiraan fursado labaad.
Markaan ka fikiro dadka aan ku ixtiraamo qadka, waxaa jira wax iyaga la mid ah. Waa kuwan wax yar oo ka mid ah madaxa sare ee madaxayga:
Seth Godin - waxba kama joojinayaan Seth inuu sheego ra'yigiisa. Waxaan arkay isaga oo la macaamilaya taageere masayr badan mar qudha oo uu si fudud khad ugu xariiqay ciidda oo aan marnaba u oggolaan in la dhaafo.
Guy Kawasaki - qiyaastii 6 sano ka hor, waxaan sameeyay faallo dameer caqli badan oo ku saabsan kooxda Guy ee folks tweeting for isaga. Isla markiiba wuu toogtay wuxuuna cadeeyay cida ka dambeysa kumbuyuutarka.
Gary Vaynerchuk - hufnaan, bilaa suugaan iyo wejigaaga - Gary wuxuu had iyo jeer u sheegaa dhagaystayaashiisa waxa ay u baahan yihiin inay maqlaan.
Jason Falls - Jason joogsi ma leh. Muddada.
Nicole Kelly - naagtani waa dusha sare… hufan, qosol badan sida cadaabta, iyo - mar kale - weligood isma celiso.
Chris Abraham - Waan hubaa inaan aniga iyo Chris isku falcelis nahay markasta oo aan aragno qoraal siyaasadeed oo kan kale qoray. Marnaba gadaal uma laabanayo waana daacad iyo dareen.
Ma hubo in mid ka mid ah dadkani aniga oo kale ah (waan ogahay xaqiiqda qaar ka mid ahi way neceb yihiin siyaasaddayda). Laakiin dhib malahan maxaa yeelay aniga ixtiraam maamulkooda. Waan ogahay in markaan u baahdo jawaab daacad ah, kuwani ay yihiin qaar ka mid ah folks-ka aan waligood qiiqi doonin. Erayada ma jarayaan… way dhihi doonaan.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaan bartay macmiil faraxsan ma had iyo jeer ku dheji Macaamiil hela natiijooyin wanaagsan, in kastoo, had iyo jeer ku dheggan. Shaqadaydu maahan inaan saaxiib la ahaado macmiilka, waa inaan qabsado shaqadayda. Taasi mararka qaar waxay u baahan tahay inaan iyaga siiyo wax uun markii ay go'aano liita gaaraan. Marka la eego xulashada dalbashada ixtiraamka iyo hubinta natiijooyinka AMA in ganacsigeyga macmiilku dhaawacmo oo ay na eryaan - markasta waxaan siin doonaa warka xun.
Miyey igu dhaawacday baraha bulshada? Waxay kuxirantahay waxaad ujeedo dhaawici. Haddii cabirkaaga guusha uu yahay taageere iyo xisaabiye raac - markaa haa. Hase yeeshe, kuma cabbiro guusha sidan. Waxaan ku cabirayaa tirada shirkadaha aan caawinay, tirada tallooyinka ee aan ku helno af iyo adinba, tirada dadka u kacaya inay ii mahadceliyaan khudbad ka dib, tirada kaararka mahadnaq ee gidaarkayaga sudhan shaqada (mid walba waanu haynaa!) iyo tirada dadka ila xayiran sannadihii la soo dhaafay.
Ixtiraamka iyo maamulku uma baahna heshiis ama wax la mid ah. Waxaan hayaa macaamiil aad u fiican, shaqaale aad u fiican, akhristayaal aad u wanaagsan, iyo saaxiibo badan, taageerayaal iyo kuwa raacsan oo aan u baahanahay intaan noolahay.
Daacad u noqo dhagaystayaashaada. Taasi waa sida kaliya ee aad run ugu noqon karto naftaada.
PS: Haddii aad la yaaban tahay cidda aan ku qaddarin qadka tooska ah… liistadu aad ayey u dheer tahay. Xilligan, liiska ugu sarreeya ayaa ah Matt Cutts. Maaha wax shaqsi ah just Uma dulqaadan karo siyaasaddiisa saxda ah, ee si taxaddar leh loo cabiray, jawaabaha qoraalka ah ee su'aalaha guud ee guud. Waxaan weydiiyay Matt dhowr su'aalood oo taxadar leh sanadihii la soo dhaafay laakiin, sida muuqata, dhibcaheyga Klout kuma filna isaga inuu waligiis ka jawaabo. Waxaan si joogto ah u arkaa isaga oo la sheekaysanaya yaa waaye. Waxaa laga yaabaa inay tahay wax aan idhi… Ma aqaan oo dan kama lihi.
Ku dar liiskan qof kasta oo sii wadaya inuu sawirro iska qaado si uu maalinta oo dhan ula wadaago ama uga hadlo naftiisa qofka saddexaad. Haddii ay la wadaagaan xigashadooda, runtii waxaan doonayaa inaan ku dhufto cunaha. Kaliya sheeg.
Tags: chris ibraahimgary vaynerchukGuy Kawasakijason dhaconiiko kellyseth godin
Tijaabinta Isticmaalka Crowdsourced ee isticmaalaTesting.com
Jun 7, 2013 at 1: 42 PM
Waa hagaag waa inaan sheegaa in qoraalkaagu si aad ah iigu dhiirrigeliyay - ugu yaraan ku filan si aan jawaab uga helo. Waa hubaal - run u noqo naftaada. Waa habka kaliya ee runtii loogu raaxaysan karo shaqadaada. Kaliya hal shay oo i wareeriyay ayaa hadana sax ahaa dhamaadka. Ma jecli dadka wadaaga xigashooyinkooda. Xiiso badan. Waxaan inta badan hurdada ka kacaa saacadaha hore aniga oo fekeraya ama laba qoto dheer, kuwaas oo qaarkood runti i dhaqaajiyaan. Hadda waan ogahay in dadka kale aysan sidaa u dhaqaajin karin, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo waxa qalbiyadooda ku jira, intii aan aqrin lahaa waxyaabaha dadka kale dib uga soo cusboonaadeen (badanaa kuwa loogu yeero dadka caanka ah). Kaliya fikirradayda.
Jun 7, 2013 at 2: 46 PM
Waa salaaman tahay @ guuleysi: disqus. Kama soo horjeedo xigashooyinka ay leeyihiin dadka waaweyni… waa marka ay dhab ahaan dhajinayaan xigashada, xigashooyinka, iyo magacooda ku dul qoran si ay dadka kale ula wadaagaan Waxay umuuqataa xoogaa narcissistic - waa ra'yigayga. Waad iga xigan kartaa that
Jun 8, 2013 at 4: 47 PM
“Ma doonayo inaan dadaal ku bixiyo inaan noqdo qof isku mid ah, waxaan doonayaa inaan noqdo qof qiiro leh oo daacad ah. ”
Waan jeclahay tan, aniga sidoo kale. Waxaan sii wadaa akhrinta maqaallada soo jeedinaya tayada dhagaystayaasha marka loo eego tirada. Waxay umuuqataa in dad badan oo guuleysta ay ogaadeen inay jiraan dad iyaga u gaar ah oo ku dhagan iyaga halkii aad isku dayi laheyd inaad ka farxiso qof walba. Farriin weyn.